भाइ’रल हात्ती’को तस्वीरको यथार्थ : हिँड्दाहिँड्दै जंगलमै सुस्ताए … गन्तव्यवि’हीन यात्रा गरिरहेका उनीहरू कहाँ जान हिँडेका हुन् ? (फोटो फिचर र भिडियो)…
काठमाडौँ– चीनमा बासस्थान छाडेर १५ महिनादेखि लगातार यात्रारत हात्तीको बथानको चर्चा विश्वभर चुलिएको छ । बासस्थान छाडेर गन्तव्यविहीन यात्रा गरिरहेका उनीहरू कहाँ जान हिँडेका हुन् ? त्यो कसैलाई थाहा छैन । तर आफ्नो बासस्थान छाडेर १७ वटा हात्ती यात्रामा निस्किएका छन् । ती मध्ये २ वटा हात्ती पहिला आएको जंगलतिर फर्किएका छन् भने बाकीँ १५ हात्ती गन्तब्यविहीन हिँडिरहेका छन् ।
ती हात्तीहरूको तस्वीर चर्चामा आउनुको कारण भनेको लामो यात्राका क्रममा थकाई लागेर जंगलमा सुस्ताउनु हो । अहिलेसम्म ५ सय किलोमिटर हिँडिसकेका ती हात्तीहरू थकाई लागेपछि जंगल बिचमा सुतेका थिए । एकअर्काको नजिक रहेर जंगलमा सुतिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई निगरानी गिररहेका चिनियाँ अधिकारीहरूले तस्वीर खिचेको थियो । सोही तस्वीर सार्वजनिक भएसँगै अहिले विश्वभर भाइरल बनेको छ ।
हात्तीको निगरानीका लागि चीनले पाँच सय मानिस खटाएको छ भने हात्तीको २४ घन्टा निगरानीका लागि १४ वटा ड्रोन, ट्रक र ७६ प्रहरी गाडी प्रयोग गरिएको छ । यतिमात्र होइन, हात्तीलाई खुवाउन १८ टन खाना समेत बनाइएको छ ।
फोरेस्ट्री र ग्रासल्यान्डको प्रान्तीय ब्युरोले मंगलबार कुनमिङबाट २० किलोमिटर पर रहेको युक्सी शहरमा हात्तीको बथान पुगेको बताएको छ । चीनको युनानको सिसुवाङबन्ना स्वशासित क्षेत्रस्थित जंगल छाडेर निस्किएका ती हात्तीलाई शहरमा पस्न नदिन विभिन्न उपाय लगाएका छन् । हात्ती हिँड्न लागेको बाटोलाई बन्द गरेर मानिसलाई रोकिएको छ भने बस्तीमा पस्न नदिन ठूला गाडी, पर्खालले छेकिएको छ ।
बिबिसीका अनुसार अहिलेसम्म हात्तीको यो बथानले मानवीय क्षति गरेको छैन । तर ५६ हेक्टर जमिनमा गरिएको खेतीमा क्षति पुर्‍याएको छ । एसियाली हात्तीहरू बसाइ सर्नु सामान्य हो तर यो केही सीमित क्षेत्र भित्र मात्रै हुने गर्छ । तर यसरी यति लामो दूरीको यात्रा गर्नु एकदमै दुर्लभ हो ।
२०७८ आश्विन २४, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 234 Views